Shimbiraha careysan - Androidsis | Androidsis
Shimbiraha careysan waa ciyaar ay soo diyaarisay istuudiyaha fadhigiisu yahay finland ee Rovio. Ciyaartan, oo noocyadeeda cusub ay soo if baxeen sannadihii la soo dhaafay, ayaa noqotay mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka ee aaladaha Android. Thanks to kulankaan waxaad heli doontaa saacado aan dhammaad lahayn oo madadaalo ah.
Qeybtaan waxaad ka heli doontaa dhammaan wararka ku saabsan Shimbiraha careysan. Sidoo kale dhammaan xiisaha ama khiyaanooyinka si aad u awood ugu yeelatid mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan sanadihii ugu dambeeyay ee ku saabsan Android. Haddii aad tahay taageere ciyaartan, isha ku hay qaybtaan.
Burburiyo Qasrigu waa "Shimbiro careysan" oo buuxa oo aad ku burburinayso qalcado
by Manuel Ramirez samee 3 sano .
Burburi Daarta: Master Siege waa dhamaan «Shimbiraha Xanaaqsan» oo aan ku khasbanaanay inaan burburinno boqolaal qalcado ah ...
Shimbiraha Xanaaqsan 2 waxay soo bandhigayaan Qabiilooyinka u dabaal dagaya sanad-guuradoodii labaad
by Jose Alfocea samee 4 sano .
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ciyaaraha qalabka moobiilku waa kan shimbirahaas had iyo jeer xanaaqsan, ...
by Manuel Ramirez samee 5 sano .
Rovio wax badan ayuu doonayaa waxaanan aragnay ciyaaro kala duwan oo isku dayay inay ka fogaadaan Shimbiraha Xanaaqsan, in kastoo natiijada laga yaabo inay ...
Fiisigiska walxaha ee ciyaarta fiidiyowga maanta wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku qosolno xilliyadaas ...
Soo dejiso Falimaha Shimbiraha Xanaaqsan hadda, Rovio cusub oo hadda bilaash looga heli karo Google Play Store
by Francisco Ruiz samee 6 sano .
Kuwani Rovio ayaa mar kale sameeyay oo waxay u yimaadeen culeyska adduunka oo dhan iyagoo cusub ...
Shimbiraha Xanaaqsan Fal! waxaa laga heli karaa hadda Android-ka xulashada gobollada
by Manuel Ramirez samee 6 sano .
Rovio wuxuu kusii socdaa khaladaadka uu la socdo shimbirahiisa waalan ee leh doorbid aad u weyn oo loogu talagalay noocyada ...
Shimbiraha Xanaaqsan 2 hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Bartamihii bisha waxaan ogaanay warka imaatinka Shimbiraha Xanaaqsan 2. Tan labaad ayaa ugu dambeyn timid ...
Rovio wuxuu ku dhawaaqay Shimbiraha Xanaaqsan 2 bisha Luulyo 30
Rovio wuxuu ku soo noqonayaa dacwada shimbiraha yaryar ee dareema inay dareemaan inay iskood isu diyaariyaan kana hortagaan dhufaysyada iyo caqabadaha ay ku dhammeeyaan ...
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaalku wuxuu u yimid inuu waqti fiican la qaato xujo sheydaan
Ragga Rovio halkan ayey mar kale iyo markan la joogaan fikrad aad u soo noqnoqota mana ahan ...
by Manuel Ramirez samee 7 sano .
Haa, waxaan horeyba u wajahnay mid ka mid ah kuwa cusub ee Rovio ee leh sida ugu weyn ee ay u yihiin shimbiraha waalan ee ...
Qeybta cusub ee 'Doofaarka Doofaarka' waxay la timid Birds Birds Star Wars II oo leh heerar cusub
Wax yar ayaa laga sheegayaa Shimbiraha careysan ee aan la ogeyn, marka laga reebo waxa ay tahay soo bandhigida kuwa cusub ...